ဘယ်သူမှမစကြသေးလို့ပါ။- စာမျက်နှာ3— MYSTERY ZILLION
မ kzthet ထင်တယ်နော် အစ်မရေ ကူညီမယ်ဆိုရင် k လေးရိုက်လို့ရပါတယ်။ K လေးကိုကူရိုက်ပေးပါဗျာ...
ကျွန်တော်eကိုတာ၀န်ယူလိုက်ပါပြီ။
( ( ကျွှန်တော် Thread ကိုပျောက်လို့လိုက်ရှာရင်းကြားနေတာပါ. .. ။ ဒီလိုဘ၀ပြောင်းလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ဘူး :O :O :O
ကျွှန်တော် ကို ဘ၀ပြောင်းအောင်းတော့လုပ် လိုက်တယ် ကို ညမီးအိမ်
ဘယ်လို ပဲပြောပြော ကျွှန်တော် ကူညီပါ့မယ် :106:
K ကို ဘယ် Dictionary နေကူးယူရမယ်ဆိုတာတော့ ပြောပြပေးပါ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသေချာမသိလို့ပါ
Dictionary ကဘယ်ဟာနဲ့မဆိုရိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်ကိုဒေါင်းပြီးသွားရင် အဲဒီမှာလိုတာလေးတွေဖြည့်ပြိးရိုက်လိုက်ရင်ရပါတယ်
ကျနော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲပြော ချစ်ညလေးအတွက်ဆို ကိုယ်ကြိုးစားပါ့မယ်။ ညီအကိုလိုချစ်တယ်လို့ပြောတာနော်။ တော်ကြာ ကြွက်ထင်ဝက်ထင် ထင်နေအုံးမယ်။:d
ဘယ်မှာ download လုပ်ရမလဲအဲဒီလိုဆိုရင် ပေါက်ဖာရုံလိုက်ရုံပေါ့
ဒါဆိုရင် အစကနေပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ အဲဒီမှာ လင့်ပါတယ်ဒေါင်းဖို့မရရင် [email protected] ကျွန်တော်ကိုလှမ်းမေးနိုင်ပါတယ်ဗျား
ကူပေးကျလို့ကျေးဇူးပါ ကိုညလေးက အခုဆိုင်ပြင်နေလို့ အွန်လိုင်းသိပ်မလာဘူးဖြစ်နေလို့ကျွန်တော် သူ့အစားဖြေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျား
အစ်ကိုရေ ကျွန်တော် အမှားအတွက် အနှုးအညွတ်တောင်းပန်းပါတယ် kzthet ဆိုတော့ ကေဇင်သက် လို့ထင်လို့ပါ တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။ ရိုက်ပြီးသားတွေဒေါင်းချင်ရင်တော့
ကိုကြီးအိုင်ကူညီမယ်ဆို l လေးကိုရိုက်ပေးပါဗျာ။ ကူညီမယ်ဆိုတာအတည်ဖြစ်သွားရင် အကြောင်းပြန်ပါဦးနော်
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အသေးစိတ်ပြောပေးနော်။ ကျနော်က Chinese Excel သုံးနေရတာ။ Excel လည်း မကျွမ်းဘူး။ မြန်မာစာရိုက်တာလဲ ညံ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါ့မယ်။ ဒါပြီးရင် ကျနော်တို့တွေ မြန်မာ-English Translation ကိုသွားကြမလား။
ကိုညလေးပေးတဲ့ လင့်လေးကိုဒေါင်းလိုက်ပါ ပြီးရင် အစ်ကိုတာဝန်ယူတဲ့ ဟာကိုစရိုက်ပါ လိုတာလေးတွေဖြည့်ပေါ့ဗျား ပြီးတော့်ကို ညလေးကို ပို့ပေးလိုက်ပါ
ကျွန်တော် Reference လုပ်ရိုက်တာ ၂၀၀၁ ထုတ် မြန်မာစာအဖွဲ့မူပိုင်လို့ဆိုထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ
အဘိဓာန် စာအုပ်ပါခင်ဗျ။ တခြားသူတွေရော ဘာတွေနဲ့ချနေကြလဲ မသိဘူး။ ကျွန်တော်ကြားဖူးတာ
Dr. ဘဟန် တို့ ဦးထွန်းညိမ်း(ငြိမ်း) တို့ကတော်တော်စုံတယ်ဆိုပဲ။ ကျွန်တော်Reference လုပ်တဲ့ စာအုပ်မှားရင်လည်းပြောကြပါဦးခင်ဗျား။
မှားတော့မမှားပါဘူး ဆက်ရိုက်ပေးပါ ကောင်းပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျား
m က available ဆိုတော့ ကျွန်တော်ဆက်တာ၀န်ယူလိုက်ပါ့မယ်။eကပြီးလုပါပြီ။ ကျွန်တော် ကိုညမီးအိမ် နဲ့ ကိုGipsy ဆီကို pm မပို့ဘဲ ဒီမှာ Post တင်ရတာက ဒီ Thread လေး Home Page မှာပြန်ရောက်ပြီး တာ၀န်ယူနေကြသူအားလုံး နိုးနိုးကြားကြားရှိနေစေချင်လို့ပါ။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ကိုရဲထက်ခင်ဗျာ။ ဒီလကုန်ကျရင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကျွန်တော်အင်တာနက်ကိုအရင်လိုမသုံးနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒီတော့ ကျွန်တော် dictionary ကိုတာဝန် အရင်လိုယူနိုင်တော့မှာမဟုတ်တဲ့အတွက် ကိုစေတန်က သူပြန်ကိုင်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။
ကူညီနေသောအားလုံးသော ညီအစ်ကိုမောင်နှမများခင်ဗျ။ ရိုက်လို့ပြီးသွားသော အလုံးများကို ကိုစေတန်ဆီ မေးလ်းပို့ပြီးပေးချင်ဖြင့် mzdictionary ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြည့့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ မြန်မြန်ပြီးအောင်ကူညီကြပါဦးလို့...ကျွန်တော်ညမီးအိမ်က အကူအညီတောင်း တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
r - ကိုတာယာ (available) ဘာမှအကြောင်းမပြန်ပါတော်တော်ကြာနေသောကြောင့်
ကိုmk杰ဆီကလဲဘာအကြောင်းမှမပြန်ဘူး။ တစ်လုံးပြီးရင် တစ်ခါပို့စေချင်ပါတယ်ဗျာ။ ဒါမှ ကိုစေတန်လဲ လုပ်ရတာသက်သာအောင်ပါ။
ကိုmk杰ဆီကလဲဘာအကြောင်းမှမပြန်ဘူး။ တစ်လုံးပြီးရင် တစ်ခါပို့စေချင်ပါတယ်ဗျာ။ ဒါမှ ကိုစေတန်လဲ လုပ်ရတာသက်သာအောင်ပါ။ အစုံအပြုံလိုက်ကြီးတစ်ခါတည်းပို့တော့ သူလဲ မသက်သာဘူးပေါ့။
ကိုညလေးရေ အချိန်ဘယ်လောက်အတွင်းပြီးရမလဲ သတ်မှတ်ထားပါသလဲ ခင်ဗျာ
သတ်တော့မသတ်မှတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် April အမှီလောက်ဆိုတော့ မတ်လလောက်ပြီးစေချင်တယ်ဗျ ကျွန်တော်ကတော့
ငါနော် ဒိုမိန်းလှုထားပြီးတော့ ခုထိမမြင်ရသေးဘူး။ အားကြီးမြင်ခြင်နေပြီ။ Project Manager သုံးယောက်ပြောင်းသွားတယ်နော် ... မပြီးသေးဘူး။ (အမှန်တကယ်လက်ဝင်တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပါကြောင်း။ ပြန်ချော့တာ:P)
ဟုတ်ကိုဒီဘီအေ ရေ ကျေးဇူးပါ အားလုံးကိုလည်း အကြောင်းကြားထားတယ်ဗျ ဘယ်သူမှအကြောင်းမပြန်သေးလို့ပါ သူတို့ဆီက ရရင်တော့ကောင်းပါတယ်ဗျား
ကိုအိုင်းရေ ကျွန်တော့်ကိုမေးရင်တော့ အမြန်ပြီးလေးကောင်းလေပေါ့ဗျာ။ အမြန်ဆိုတာ ပြည့်စုံကောင်းမွန်တာပါပါတယ်နော်။ ဒါပေမယ့်ပေါ့လေ အားလုံးကစေတနာနဲ့ဝိုင်းကူနေတာဆိုတော့ အတင်းကြီးလုပ်ခိုင်းလို့လဲမဖြစ်ဘူးလေ။ ဒီ project ကြီးစနေတာတော်တော်ကြာနေပြီဗျ။ ကျွန်တော်ဒီဖိုရမ်ကိုမရောက်ခင်ကတည်းကစနေတာ။ ဘယ်နေ့အပြီးရေးရမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်မသတ်မှတ်ချင်ဘူးဗျ။ စေတန်ကတော့ ကျွန်တော့်ကို ပါဝါအပြည့်ပေးထားတယ်လို့တော့ပြောထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်မဆုံးဖြတ်ရဲဘူူးဗျာ။ ကျွန်တော့်အစား Admin တစ်ယောက်ဆုံးဖြတ်ပေးပါ။
အပေါ်လင့်လေးက ဒီ project ရဲစတင်ခြင်း thread လေးပါ။ အဲဒီမှာအရင်ကအစ်ကိုအစ်မတွေရဲ့ကြိုးစားမှု့လေးတွေပါ။ ၂၀၀၇ ကတည်းကစနေတာ အခု ၂၀၀၉ ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ တော်တော်ကြာနေပြီဗျ
အကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အရင်လို internet မသုံးနိုင်တာကြားရတော့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။
အကိုသဘောအရ ပြန်တုံပြန်ရရင်တော့ ကိုစေတန်ရေ w ဘဲတာ၀န်ယူပေးပါ။
မီးရဲ့ အမှောင်ကျမှု ကြောင့် ကျနော် ဒီလိုနောက်ကျခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်သေးဘူး ကိုmk ရ စေတန်က စာလုံးတွေကိုကူရိုက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး သူကအစ်ကိုတို့ရိုက်ထားတဲ့စာတွေကိုပြန်စီ ပြီးရင် ဆော့ဝဲလ်အနေနဲ့ပြန်လုပ်ရမှာကိုဆိုလိုတာဗျ။ :d
ဒါဆိုလဲ ကျနော် တာ၀န်ယူထားတဲ့ စာလုံး4လုံးကို အတတ်နိုင်ဆုံး ပြီးပြည့်စုံအောင် ရိုက်ပေးပါမယ်။:)
မိုးလေဝသ ကင်းစင်လို့ ရိုက်မယ်ကြည့်လိုက်တော့ dictionary မရှိဘူး အဲဒါလေ dictionary link လေးတင်ပေးအုံးနော်။
ပြီးတော့ ကြားထဲက ရိုက်ပေးရမှာလား။ ကြားထဲကို ဘယ်လိုဖြေ့ရမှာလဲ။ မရီကြနဲ့နော် Excel အခုမှသုံးဖူးတာ
မရီပါဘူးဗျား....ဟီး ..........မရှိဘူးလား မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန် ဟုတ်တယ် ကြားထဲက ကိုယ်တာဝန်ယူထားတာကို ရိုက်ရမှာဗျ
မရှိရင်တော့ မပြောတက်တော့ဘူး ပို့ပေးရမလား ဟင်
ကိုအိုင်းရေ ကျွန်တော့်မှာလဲ dictionary လင့်ခ်မရှိဘူးဗျ။ ကျွန်တော်ကအိမ်မှာရှိတဲ့စာအုပ်လေးနဲ့ရိုက်တာဗျ။ အစ်ကို့အိမ်ကလူကြုံမှာလိုက်လေ
နှစ်သစ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ ချစ်မကြီး မယ်မင်းမိနှင်း(နှင်းဆက်ပိုင်)က N ကိုအပြီးရိုက်ပြီးကျွန်တော့်ကိုပို့ထားပေးပါတယ်။ ပျော်လိုက်တာ ပို့တဲ့လူရှားနေတာကြာပါ့။ သူပို့လိုက်လို့တော်တော်ပျော်တယ်ဗျာ။ မယ်မင်းမိနှင်းရေ အခုလိုအများအကျိုးကူညီလို့ နှစ်သစ်မှာ ကိုကိုချောချောနဲ့တွေ့ပါစေဗျာ။
ကိုအိုင်းရေ ကျွန်တော့်မှာလဲ dictionary လင့်ခ်မရှိဘူးဗျ။ ကျွန်တော်ကအိမ်မှာရှိတဲ့စာအုပ်လေးနဲ့ရိုက်တာဗျ။ အစ်ကို့အိမ်ကလူကြုံမှာလိုက်လေ :d
ကျန်တဲ့လူတွေဘာနဲ့ရိုက်ကြတာလဲဟင် ငိုချင်လာပြီနော်။ သိတဲ့လူတယောက်ယောက် တင်ပေးနော်။ ထမင်းကြွေးမယ် (အိမ်မက်ထဲမှာ)။ အခုလောလောဆယ် ဘယ်လူကြုံမှ မရှိဘူး။ လူကြုံစောင့်ရင် ဝါကျွတ်သွားလိမ့်မယ်
မ Arozif ကလဲကူညီချင်တယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကိုမေးလ်ပို့ထားတယ်ဗျ။ မ Arozif ရေ R လေးကိုကူရိုက်ပေးပါနော်။
MZ Dictionary ကိုကူညီနေသော MZ မောင်နှမများ ကျွန်တော်မနက်ဖြန် အလုပ်ပြောင်းရတော့မှာမို့ MZ Dictionary ကို ကျွန်တော်အပြည့်အဝမကူညီနိုင်တော့ဘူးခင်ဗျ။ ဒါကြောင့်အကြောင်းတစ်ခုခုရှိရင် ကျွန်တော့်ကိုမေးလ်ပို့ထားပါ (သို့မဟုတ်) Admin ကြီးစေတန်ဆီကို PM ပို့ပြီးအကူအညီတောင်းနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Gipsy လေးလဲကူညီမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီ ၁လ ၂လအတွင်းတော့ သိပ်မတတ်နိုင်လောက်ဘူးထင်တယ်။ အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်(အပြီးအပိုင်းမဟုတ် ခဏသာ) ပျော်ရွှင်ပါစေ။
ကိုညလေး အနားယူမူအတွက် စိတ်မကောင်းပါ သို့သော်ငှားလည်း ကျန်နေသေးသူများ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် ဂျစ်ပဆီလေးမှ ကူပေးပါ့မယ် ဗျား ဒါပေမယ့် ရိုက်တော့မရိုက်ပါ့ရစေနဲ့ဗျား
စာကူပြီးရိုက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဘယ် စာလုံးကို ရိုက်ပေးရမလဲပြောပါ။ :)
i လေးရိုက်ပေးပါ့လား ဗျား
ရိုက်ပေးမယ်။ ဘယ် dictionary ကရိုက်ပေးရမလဲမသိဘူး။ ပညာရေး၀န်ကြီးဌာနက ထုတ်တဲ့ CD ထဲကဆိုရင်ရလား။ ရတယ်ဆိုရင် အခုစရိုက်လိုက်တော့မယ်။
ရပါတယ် ဘာနဲ့ပဲရိုက်ရိုက် update ဖြစ်တဲ့ ဟာလေးနဲ့ရိုက်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျား ကျေးဇူးပါဗျား
Could someone please upload Eng-Myanmar Dictionary for me. (in any upload sites except Zshare) Thank you very much
ကို YeHtet တာ၀န်ယူထားတဲ့ E နှင့် M ကတော့ ရေးလို့ ပြီးတော့မှာပါ....ကျန်နေမှာစိုးလို့
ပြန်လည် စစ်ဆေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလို နှိုးဆော်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အစ်ကို Istein !!!!!!!!
ကျွန်တော်သုံးတဲ့ babylon Pro v 7.0.3.11 ကိုတင်ပေးလိုက်တယ်....ကျွန်တော်ကတော့မြန်မာ
Dictionary နှစ်ခုသုံးတယ်.....:D:D ....နောက်တစ်ခုက Myanmarengineer.org က ကိုရေးခါးလုပ်
ထားတဲ့ Dictionary ကိုသုံးတယ်....အစ်ကိုလိုချင်ရင်ထပ်တင်ပေးပါ့မယ်.......
အမြန်ဆုံး လက်ရှိ ပြီးတဲ့သူတွေ ကျွန်တော့်ကို ဖြစ်ဖြစ် gipsy ကိုဖြစ်ဖြစ်ပို့ပေးကြပါ။ ကျွန်တော် ၁၅ ရက်နေ့လောက်ဆိုရင် dictionary ကို ရပ်ပါတော့မယ်။
Online dictionary ပုံစံသွားမှာမို့ပါ။
ဘယ်လို မျိုးလဲ။ စာလုံးရိုက်ရှာလိုက်ပါ။ မတွေ့ရင် သင်ကိုယ်တိုင်ဖြည့်လိုက်ပါ။ admin တွေက approve လုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ သင်ထည့်ထားတဲ့ word ကိုသူများတွေ ရှာဖွေတွေ့နိုင်ပါပြီ။
စာလုံးတွေ့တယ်။ ဒါပေမယ့် စာလုံးအသစ်ဖြည့်ချင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ admin ပိုင်းက approve ပြီးရင် အဲဒီ စာလုံး ရှာလို့တွေ့ပါပြီဗျာ။ ဒါမှမဟုတ် စာလုံးမှားနေလို့ ပြင်ခိုင်းတဲ့ report လည်းတင်လို့ရတယ်။ admin ပိုင်းက ဖတ်ပြီးတာနဲ့ ပြင်သင့်ရင် ပြင်ပေးပါ့မယ်။
လူတိုင်းဝင်ထည့် ဝင်ပြင် dictionary လုပ်မလို့ပါ။ နောက်အကျဆုံး လကုန်ပါ။ အဲဒီအတွက် လုံးချာလည်လိုက်နေပါတယ်။ own tune ရေးနေလို့ အခုတလော လုံးဝကို မအားဘူးဖြစ်နေတာပါ.... satubuntu လည်း လာပါတော့မယ်...... ( Vista အတိုင်းပဲနော်... လှတာပြောတာမဟုတ်ဘူး.. သတင်းထွက်ပြီး ကြာနေတာကိုပြောတာ.... :P )
စာလုံးတွေ့တယ်။ ဒါပေမယ့် စာလုံးအသစ်ဖြည့်ချင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ admin ပိုင်းက approve အဲဒီ စာလုံး ရှာလို့တွေ့ပါပြီဗျာ။ ဒါမှမဟုတ် စာလုံးမှားနေလို့ ပြင်ခိုင်းတဲ့ report လည်းတင်လို့ရတယ်။ admin ပိုင်းက ဖတ်ပြီးတာနဲ့ ပြင်သင့်ရင် ပြင်ပေးပါ့မယ်။
Online တွင် စာလုံးရေ... ကျွန်တော်တို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အဆင့်ရောက်တိုင်း csv file ထုတ်ပေးမှာပါ။ babylone နဲ့ stardict ကိုပါ ထုတ်ပေးမှာပါ။ အဲဒီအခါ သင်ကိုယ်တိုင် babylone မှာသာမက သင့်ကိုယ်ပိုင် dictionary တစ်ခု လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်ပြီလေ။
ကောင်းပါတယ်ဗျား ကျွန်တော်လည်း သိပ်အားမရတာနဲ့ အစ်ကိုတို့ပါလာတာ ကောင်းပါတယ်ဗျား ကျွန်တော့်ဆီပို့ချင်ရင် အီးမေး က gipsyhnh (at) gmail.com ပါဗျား
ဒါဆိုရင် ကျနော်ရော ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဟင်။ dictionary မရှိလို့ love တလုံးပဲရိုက်ရသေးတယ်။
ရိုက်ပေးမယ် (၂"x၁" နဲ့........ ဟီး၊ ဟုတ်ဘူးနော်။ နောက်တာ။ ကြောက်နဲ့။ ) ဘယ်နေရာ ဘာလိုလဲသာပြော။ ယုဒသန်ကစပြီး ဦးထွန်းငြိမ်းအထိ ရှိတယ်။ ဘယ်စာလုံးလိုသေးလဲဗျိုး။ :101:
ရိုက်ပေးမယ် (၂"x၁" နဲ့........ ဟီး၊ ဟုတ်ဘူးနော်။ နောက်တာ။ ကြောက်နဲ့။ :d ) ဘယ်နေရာ ဘာလိုလဲသာပြော။ ယုဒသန်ကစပြီး ဦးထွန်းငြိမ်းအထိ ရှိတယ်။ ဘယ်စာလုံးလိုသေးလဲဗျိုး။ :101:
အခုလောလောဆယ်တော့ မကူပေးပါနဲ့ဦး ဆိုဒ်လေး ပြီးသွားမှတင်လိုက်မယ်လေ(စေတန်လေသံ) အဲဒီတော့မှလိုတာလေးတွေရိုက်ထည့်ပေါ့ဗျား